ပြောင်းရွှေ့လာသောလူအခွင့်အရေးများ: တစ်ဦးလူဝင်မှုအဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ | USAHello
သငျသညျကို USA ၌သင်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုသိလား? သင်တစ်ဦးလူဝင်မှုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအရပ်ဖက်အခွင့်အရေးရှိသည်, လူ့အခွင့်အရေးကို, နှင့်ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများ. သင်ပင်သင်သည်ရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူလျှင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးတွင်ဤအခွင့်အရေးရှိသည်. သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ.
အဘိဓါန် Arabic, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ဆိုမာလီ, ဒူ, အဘိဓါန် Mandarin-, ပြင်သစ်, ဟိန်ဒီ, နှင့်ပနျခြာပီဘာသာစကားများ. LGBTQ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်လက်စွဲ, အရွယ်ရောက်သူ, နှင့်မပါဘဲသားသမီးများ.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဥပဒေရေးရာအကြံပေးများကိုဥပဒေရေးရာရည်ညွှန်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျက၎င်း၏သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုမှာအမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်: (312) 263-0901. ဤစာရွက်စာတမ်းသူတို့လိင်တူချစ်သူကြောင့်သူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားဖို့ကြောက်လန့်နေသောလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးသို့မဟုတ်လိင် (လိင်တူချစ်သူ) နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ HIV အခြေအနေကိုကြောင့်. သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါကသငျသညျထိခိုကျသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမျ့မညျကိုကွောကျရှံ့လျှင်သင်ပြည်နှင်ဒဏ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးရှိစေခြင်းငှါ.
သင်တို့သည်လည်းများတွင်စာရွက်စာတမ်းဖတ်ရှုနိုင်သည် စပိန်, ပြင်သစ်, သို့မဟုတ် အဘိဓါန် Arabic.
“ကျနော်တို့အခွင့်အရေးရှိသည်” - ACLU ကနေဗီဒီယိုတွေကို
သငျသညျစပိန်ရှိဗီဒီယိုအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်, ဒူ, အဘိဓါန် Arabic, Haitian Creole အဘိဓါန်, ယင်းအပေါ်ရုရှားနှင့်အဘိဓါန် Mandarin- ACLU site ကို.
ယူအက်စ်အေတှငျနထေိုငျ - သင့်လူဝင်မှုအခွင့်အရေးများကိုသိ
အနီေရာင် ကို Cards
အဆိုပါပြောင်းရွှေ့လာသောလူဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာရဲ့အနီကဒ်များလူတွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအခိုင်အမာကူညီခြင်းနှင့်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ဖို့ဖန်တီးခဲ့ကြ. သူတို့ကလူတွေကိုတစ်ဦးလူဝင်မှုမိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကိုသိကူညီပေးရန် (ရှိမရှိကဒီမှာတရားဝင်သို့မဟုတ်မ) ရင်ဆိုင်လျှင်သို့မဟုတ်ပင်နိုင်ငံသားလေ့ကျင့်ခန်းစခွေငျးငှါ.
သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ - ACLU
သင်သည်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုသိသလား? သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာသင့်အခွင့်အရေးများရှိနိုင်ပါသည်ဒါကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအကြောင်းကိုဤရွေ့ကားလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုအရင်းအမြစ်များကိုရှိ ACLU အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြ.
ICivics ကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုအမေရိကန်အတွက်အခွင့်အရေးနှင့်ဥပဒေများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဂိမ်း၏အချို့စပိန်မှာလည်းကစားနိုင်ပါတယ်.
အစစ်အမှန်ရှေ့နေများမဟုတ်သောလူစုထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဤအချက်အလက် Read! သူတို့သည်သင်၏ပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သင်ကူညီဟန်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူတွေကိုရှိပါတယ်. သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ! အဆိုပါပြောင်းရွှေ့လာသောလူဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာ (ILRC) လိမ်လည်မှုထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးရန်သတင်းအချက်အလက်လုပ်. သင်လုပ်နိုင်သည် အင်္ဂလိပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ် and download. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် စပိန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ် and download.
USA တွင်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဆိုက်ရောက်များအတွက် IRAP မှသင်၏အခွင့်အရေးများကိုသိရှိ
USA တွင်ရောက်ရှိလာ SIV ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် IRAP မှသင်၏အခွင့်အရေးများကိုသိရှိ
ဆော့ဖ်ဝဲကို update ကို IF
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ updates များကို
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ ACLU, အဆိုပါ အမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကို (NIJC), အဆိုပါ ပြောင်းရွှေ့လာသောလူဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာ (ILRC) နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.